(၂၁-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၂၉၀၉.၆) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၂၅၃၆.၄) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။ ၂၁.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY NATIONAL ELECTRIFICATION PROJECT SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
1. The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost of the National Electrification Project, and intends to apply part of the proceeds towards payments under the contract for Installation of Distribution Lines and Transformers MOEE-NEP/C1-W14/19 for Adaptation Villages in Mandalay.
Download Link : SPN(C1-W14).pdf